EYONA TATOO YOMKHONO YOKUGQIBELA EYI-137 + NGO-2021 - UHLOBO
Akukho mathandabuzo ngayo, imikhono ye tattoo yengalo iphela yamkelwe ngokubanzi phakathi koluntu, njengoko kunjalo nangee-tatoo zomlenze ezintsonkothileyo ezisolula ethangeni ukuya emaqatheni.
Italente kunye nobuchule buyaphawuleka kodwa ke lixesha kunye nenani lokuzinikezela oya kuthi ulise kwivenkile ye tattoo. Uninzi lwezi zoyilo lufuna ubuncinci beeyure ezingama-20 kunye neeyure ubuncinci ukugqiba.
Njengobuchwephesha, ukugubungela iitattoo ezibonakalayo kulula, kwaye kunokwenzeka ukuba unxibe ihempe yengubo emsebenzini nangaliphi na ixesha.
Kule khokelo ye-137 ephezulu ye-sleeve tattoo imibono, siza kukubonisa uluhlu lwezinto ezipholileyo eziqinisekileyo zokuqinisekisa kwaye zikhuthaze njengoko ulungiselela ukuzibophelela kweinki enkulu.
Bona ngakumbi malunga - Uluhlu oluGqityiweyo lweeNgcinga zeTattoo
1. IiTattoos zesiqingatha semikhono
Bona ngakumbi malunga - Iingcinga eziphezulu ze-53 zesiqingatha somkhono weTattoo
Sukuyenza impazamo. Uyilo lwemikhono enesiqingatha lunokujongeka njengokulunga kwemikhono ye tattoo ukuba ayingcono.
Abanye bathi olu hlobo lobugcisa bomzimba lukhangeleka lungagqitywanga, kodwa inyani yomcimbi kukuba banokubonakala ngathi bubugcisa.
Nokuba awukulungelanga ukungena konke kwaye ubeke i-inki phantsi kwegxalaba lakho esihlahleni, akukho nto ixhalabisayo.
Qonda ukuba i-sleeve tattoo enesiqingatha inokuba luncedo kakhulu ngokufihla. Ukuba awukho kwindawo yokuyila indawo yokusebenzela, unokubalekela kubugcisa obungafunekiyo xa usebenza nabo, abathengi, kunye nomphathi wakho bejonga ezantsi kwiingalo zakho.
2. Imikhono yeTattoos yesiNtu
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-59 ze-Sleeve Tattoo
Ingalo yonke yeetattoos zemikhono yemveli zezinye zeempawu zokuqala zobugcisa bomzimba ezikhoyo, kwaye zihlala phakathi koyilo olukhulu kakhulu nasemva kweenkulungwane ezininzi.
Iitattoo zemveli zaseMelika ziyayiphikisa ipragmatism yanamhlanje kunye nembono yabo engaqhelekanga yobugcisa. Uninzi lweeTattoos zemikhono yemveli zibandakanya uluhlu oluguqukayo lwemifanekiso ebotshelelwe kunye kuphela kwisitayile sobugcisa esigunyazisiweyo.
UKUYAumkhonoumbonouhlala ethatha uthotho lwezinto ezingadibanangaencinciumvamboizimvoemva koko sebenzisa iindlela zokufaka okanye isithuba esibi ukujikeleza lonke iqhekeza.
3. Imikhono yeTattoos yamadoda
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-67 sleeve Tattoo kuMadoda
EyahlukileyoumkhonoIitattoosNdikhawuleze ndajika ndaba zezangokuinki‘Zezona zifunwa emva yoyilo.UmkhonoIitattoossitshintshe ngokuqinisekileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo; zihlala zibonisa indibaniselwano yezitayile zobugcisa ezibandakanya inkohliso ebonakalayo, ijiyometri engcwele, iimeta zeminqweno okanyeumbala wamanziumvambo.
Itekhnoloji yale mihla inceda ukuhlahlela indlela eya kubuchuleinkiizimvo. Olu hlaziyo lubonakala ngakumbi kummandla weeyahlukileyoumkhonoIitattoos, apho aabanetalenteumzobiunokudibanisa nayiphi naumvamboisitayilekwisiqwenga esimanyeneyo nesibambayoubugcisa bomzimba.
4. Iingcamango zeTattoo sleeve kubafazi
Umthombo: @davethedot nge-Instagram
Umthombo: @dinalitun nge-Instagram
Umthombo: @hautundliebetattoo nge-Instagram Source: @explosiv_inkart nge-Instagram
Umthombo: @ftwtattoo nge-Instagram
Umthombo: @ leolauro nge-Instagram
Umthombo: @brittbeale nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-61 sleeve Tattoo kubafazi
Ngokuziphatha okukhoyo ngokwesini okutshintsha kwihlabathi leubugcisa bomzimba,umkhonoIitattooskwabasetyhini ngokukhawuleza baba sisicelo esithandwayo apho bekuya kuba ngabafana kuphela abazibophelela kuyilo lwelungu elipheleleyo.
Ukususela kwimveliIitattoo zaseJapankumtshangatshangiso omtsha,umbala wamanziumvambokunye nezakudala ezimnyama nezimvi, ezabafaziUmvamboibonelela ngemibono emnandi kunye nokukhetha kwezobuchwephesha kwiumkhono umvamboUyilo.
Utshintsho lwengqondo lubonakalisa utshintsho kubanziumvamboishishini kule minyaka ilishumi idlulileyo okanye njalo-akukho nto inkulu kakhulu, inzima kakhulu, iyothusa kakhulu, okanye ibiza kakhulu kuye nawuphi na umntu ofuna umgangathoumvambouyilo ngaphandle kwesini okanye isini.
5. IiTattoos zemikhono yaseJapan
Bona ngakumbi malunga - I-121 ephezulu ye-Sleeve Tattoo Ideas
Akunakuphikwa isibheno sobugcisaIsiJaphaniumvamboisitayilengemibala yayo emihle, uyilo olugqwesileyo lomsebenzi welayini, intsingiselo enzulu, kwaye inkulu kuneempawu zobomi.
Eyona yamkelwe kakhuluIsiJaphaniumvamboisitayileareumkhonoUyilo. KwiIsiJaphaniumvamboIsichazimagama, kukho ezimbalwaumkhonoumahluko, zonke ziyilelwe ukufihlwa engqondweni.
UKUYA nagasode igcweleumkhonoIngalo yaseJapanumvambo, gobu yiisiqingathaumkhono umvambokwiingalo ephezuluukubaleka ngaphezulu kwengqiniba, kunye Uncedo amanqaku 7/10 imikhono, ngokungathiihempe umkhonoiye yatsalwa yaya embindiniingalo.
6. IiTattoos zemikhono yeentyatyambo
Umthombo: @glenpreece nge-Instagram
Umthombo: @ meghanpatrick nge-Instagram
Umthombo: @barbaraleona nge-Instagram
Umthombo: @namakubitattoo nge-Instagram
Umthombo: @ annabel.ink nge-Instagram
Umthombo: @liannemoule nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-49 ze-Sleeve Tattoo
IntyatyamboIitattoo zezinye zezona zinto ziyilayo kunye nezinto ezinomdla ezijikeleze. Izimvo ezintsha zivavanywa mihla le ngamagcisa kunye nabaqokeleli ababuxabisileyo ubuhle bendalo yendalo.
Kwixesha langokuinki, ukuthandwaumkhono umvamboiikhonsepthi zibonelela ngamanani amakhulu kunye namathuba amatsha okuvavanya uluhlu lweembono, ukusuka kwi-watercolor engafakwanga ukuya kwiipateni ze-mandala ezicacisiweyo, okanyeIitattoo zaseJapanebonisaIintlanzi zeKoikwayeukuqhama kweetsheri.
7. IiTattoos zekota zekota
Iitattoo ezipholileyo zethole kubafana
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango zeTatoo zeKota ezingama-71 eziphezulu
Ezi tattoos zincinci zoyilo ziqala ecaleni kwengalo ephezulu kwaye ziyeke phakathi kwi-bicep, okanye zingaqala esihlahleni zize ziphele embindini wengalo.
Ngaphandle kobukhulu obuncinci yintoni eyenza ukuba ikota yemikhono yekota ibonakale iyinyani ngobume babo bokuqonda. Usaqhubeka ukonwabela ii-inki ezisongela indlela yakho ngengalo yakho ngemvelaphi egcweleyo, ecaleni kweenzuzo zokuba ukwazi ukuyigubungela ngeempahla xa kukho imfuneko okanye imood.
Ewe, njengoko ixesha liqhubeka unokuhlala ukongeza inki engalweni yakho. Ungakhankanyi, ungalolula uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwakhona kwaye ucothise imali kumvambo wamaphupha akho ixesha elide.
8. IiTattoos zeFlegi yaseMelika
Umthombo: @katrinastattoos nge-Instagram
Umthombo: @american_tattoo_authority nge-Instagram
Umthombo: @ jason_ectattoo2 nge-Instagram
Umthombo: @lucky_bd_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @tattoosbyashley nge-Instagram
Umthombo: @jaimelegion nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-89 ze-American Flag sleeve Tattoo
Iflegi yaseMelikaumkhonoIitattoosziimpawu zothando lobuzwe kunye nenkolelo ngendlela yaseMelika. Kunye nokhozi olunempandla, kunye nakwisibhengezo senkululeko, akukho miqondiso mikhulu yenkululeko.
Kwamanye amadoda nabafazi, kakhuluiiTattoo ezibonakalayoneflegi yaseMelika yimifuziselo yenkonzo yasemkhosini, okanye ukungazicingeli nokuzincama okuza nokuba yinxalenye ebomvu, emhlophe, naluhlaza.
Abanye bayalithanda eli phawu njengonikelo nje kwilizwe labo kunye nelizwe labo-isikhumbuzo esibonakalayo sento e-United States kubo.
9. IiTattoos zeRose sleeve
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango ezingama-61 zeSleeve Tattoo
I-tattoo ye-rose ihlala iyintyatyambo yodwa okanye inqwaba yeentyatyambo eziboshwe zinikezelwa ngokulula okanye iinkcukacha ezintle.
Kodwa banokudlula ngokudlulela koyilo olwenziweyo nangaluphi na uhlobo ngumzobi we tattoo onobuchule ojonge ukuguqula ubuchule babo kunye nomatshini we tattoo kumatshini weetattoos ezinkulu kakhulu.
Iitotto zeRose sleeve ziyanda ngokuxhaphakileyo, njengoko ubugcisa bujonga kwisipili sendalo ngetattoo yokwenyani, imibala emihle kunye nemidiliya yokuthambisa, ukutshintsha okunesithunzi phakathi komnyama nokungwevu, okanye iqela leentyatyambo eziqaqambileyo ezihla ngomlenze kumbala wenyambalala.
10. IiTattoos zemikhono yobuhlanga
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-90 ze-Sleeve Tattoo
Iimbali-mlando ezininzi zikholelwa ukuba ii-tattoos zemikhono yesizwe yayiyeyokuqala yeenki esekwe kubugcisa bomzimba obukhoyo.
Umgca ontsonkothileyo wenzelwe ukuba ukhulise imbonakalo yangaphandle ebukekayo. Iingalo ze-Buff ziya kukhula ngokuba nemikhono yazo yemisipha ephuculwe ziitatoo zomkhono wesizwe.
Amaqela ezizwe ahlala ephumeza umvambo wohlobo njengendlela yokubhiyozela ukukhula okanye izihlandlo ezithile. Oku kungumfuziselo kusasebenza nangoku, kwaye imizobo yenyama inefuthe elikhulu kunangaphambili kubugcisa be tattoo.
11. Uyilo lweSleeve yeJometri
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-47 zeGeometric Sleeve Tattoo
Inkolelo edumileyo ibambelela kulungelelwaniso lwendalo iphela oluqulathe iziqulatho zezibalo ezenza iplani yobomi.
AmaYiputa amandulo namaGrike, kunye nabaphengululi baseIndiya baseMpuma, bonke bahlonipha ijiyometri engcwele njengesitya esibonakalayo esinokubonisa ngemfundo yomphefumlo. Ukusukela ngoko, indalo yejometri ibhiyozelwe kuzo zonke iintlobo zobugcisa, kubandakanya ne tattoo.
Ukusuka kubume obulula obu-2-D bobukhulu obahlukeneyo ukuya koyilo oluntsonkothileyo olungenayo kunye nemiyalezo efihliweyo, akukho kunqongophala komsebenzi wejometri okhuthazayo onokukhetha kuwo.
Uyilo olupheleleyo lwejometri yengalo yomzobo we tattoo kufuna ixesha elininzi kunye nokuzibophelela kwabo bobabini umculi we tattoo kunye nomthengi, kodwa imbuyekezo ayinasiphelo.
12. IiTattoos zesiqingatha seMikhono yaBasetyhini
Umthombo: @ maria.alvarez.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @apryltrianatattoos nge-Instagram
Umthombo: @heathawetha nge-Instagram
Umthombo: @alexlozanotattoos nge-Instagram
imibono yocingo lwezinja ezincinci
Umthombo: @xjlopeztattoosx nge-Instagram
Umthombo: @aydanbg nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - I-tattoos eziphezulu ze-47 ze-sleeve ze-Women
Uyilo lwesiqingatha semikhono yeattoo luya lusetyenziswa ngokufuthi kubugcisa bomzimba kubafazi, abathi ngokwesiko bakhethe iziqwenga ezithintelweyo bathande i-inki echanekileyo.
Ukuqhuma kuyilo lwetatto yabasetyhini kule minyaka ilishumi idlulileyo kuye ngombulelo kwandise iimbono zangaphambili zendlela yoyilo kunye nokubekwa, ngoku ezinye zezona zinto zibalulekileyo kwihlabathi le tattoo.
Iitattoos zentliziyo, iiroses, kunye namabhabhathane ziya kuhlala zihlala zithandwa, kodwa abantu basetyhini ngoku banokuthi babambe irhafu ye-badass Biggie Smalls kwaye bayenze ngobuchule obonwabisayo.
13. Isixhobo seTattoo Sleeve Filler
Umthombo: @ozzyquadros nge-Instagram
Umthombo: @joegreentattooer nge-Instagram
Umthombo: @angelotattooartist nge-Instagram
Umthombo: @jacknealdraws nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-49 ze-Sleeve Tattoo Filler
Kukho uluhlu lweendlela zokugcwalisa i-sleeve tattoo enzima kwaye inomdla engalweni okanye emlenzeni.
Eyona nto ityeshelwayo kodwa ibalulekileyo kukugcwalisa itattoo, izinto ezixhasa uyilo ezihambelana nendawo ekugxilwe kuyo yitattoo ukuyinceda ukudibanisa kwaye ilingane kwilungu lonke lomzimba.
14. IiTattoos zemikhono yoMthi
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango ezingama-75 zemikhono yeTattoo yomthi
IiTattoos zemikhono yomthi zinokuvela kwimibhiyozo elula yendalo ukuya kubume bendawo obucekeceke. Iingcambu zingenza kwakhona i-cameo ekhangayo, ngoko ke i-trunk ayifanele ihoywe xa iququzelela umzobo womthi womthi.
Ukubandakanywa kwee-silhouettes yeyona ndlela iphambili kwabo banandipha ii-tattoo zemikhono yomthi, kwaye ukuthandwa kwale ndlela kubangelwa ngumnqweno wokusebenzisa i-inki emnyama endaweni eluhlaza.
Ukwenza isithunzi sigqibe, uninzi lwabantu longeza umthombo wokukhanya njengelanga okanye inyanga. Kwimfihlakalo engaphelelwa lixesha, ixesha lasebusuku liphunyezwa rhoqo ngakumbi kunasemini malunga noku.
15. IiTattoos zomkhono weCeltic
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-Celtic Sleeve Tattoo
IiTattoe zomkhono weCeltic ziyimpawu ezimnandi ezibonelela ngothotho lwesikolo esidala kubugcisa bomzimba banamhlanje.
Yonke i-Celtic sleeve tattoo ibalisa ibali eliyinyani elinyanzela kwangoko ababukeleyo.
Umongo wobuqhetseba uvela kwiingcambu zakudala, kwaye ilifa lamaCelt ligcwele uku-fanela uphawu. Amaqhina adityanisiweyo angumxholo ophambili kokubini kokubonakalayo nakwimeko yokomoya.
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-63 ze-Lion sleeve sleeve
Iingonyama ziye zaba luphawu lobugorha kunye namandla omzimba kangangeenkulungwane. Amandla engonyama kuphela ayabetha, kodwa into ebeka iingonyama ngaphandle kwezinye izilwanyana ze-savanna kukuba kude kwabo.
Iingonyama azomelelanga nje - Ingonyama ayichazi nje amandla, kodwa umyalelo kunye neRegal Persona.
Eli gunya lasebukhosini ngokudityaniswa kwamandla lenza ingonyama inkosi yazo zonke izilwanyana. Umkhono we tattoo yengonyama lukhetho olufanelekileyo kuba unika umculi we tattoo indawo eyaneleyo yokwenza umfanekiso ocacileyo okanye umbono ocacileyo, kwaye uya kubonakala kakhulu.
17. IiTattoos zeSleeve sleeve
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-59 ze-Blackout Sleeve Tattoo
Enye yeefashoni zakutshanjeUmvambokucinyiweumvambo.
Uninzi lweeumvamboumthandiufumana ugesiumvamboukufihla iimpazamo ezinxilisayo, kodwa uninzi luyakuthanda ukujonga.
Ukucima kombaneumvamboihlala isenza usetyenziso olukhethekileyo lwendawo engalunganga ukongeza umlinganiso omtsha ngokupheleleyoubugcisa bomzimba. Fumana umnyamaumvambokwaye ujoyine intshukumo.
18. IiTattoos zeSleeve zeHlathi
Umthombo: @gavdunbartattoos nge-Instagram
Umthombo: @nextlevelstudio nge-Instagram
Umthombo: @panyiklenard nge-Instagram
Umthombo: @ do.artink nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-63 ze-sleeve sleeve Ideas
Abantu banomdla ongapheliyo lihlathi kunye nemfihlakalo yalo - lenza iiTatto ezibanzi, ezinomdla kunye nezobuntu.
Kukho amandla amakhulu kwindalo engonakaliswanga, ukuvumelana kwezidalwa ezahlukeneyo kunye nezityalo ezidlala indima yazo, eziqulathwa lihlathi.
Sikwadibene nehlathi ngeholide, ukhenketho, izilwanyana kunye nezityalo, kwaye kwanendawo entle esinokuyibona kumakhaya ethu.
19. I-Octopus sleeve Tattoos
Bona ngakumbi malunga - I-50 Octopus Sleeve Tattoo Imibono
I-octopus sleeve tattoo ifaka iimpawu ezizodwa zerhamncwa nalo elibalulekileyo ebantwini.
Ukusuka kubuqu babo, ubukrelekrele bendalo kunye nobuchule bokuyila, imikhono ye-octopus yiyo yonke uyilo lwephupha lomthandi we tattoo.
Abaqokeleli abaninzi bafumana umkhono we-octopus ukuzikhumbuza ukuba kwiimeko ezahlukeneyo ebomini, kuhlala kungcono ukuba bhetyebhetye kwaye usebenzise ukuqonda ukusombulula iingxaki. I-octopus ikwanobukrelekrele obukhawulezayo kwaye iyimfihlakalo ngendlela yayo, ezizimpawu ezinokuthi zisebenze kakuhle kwiimeko ezininzi zobomi.
20. IiTattoos zokhakhayi
Bona ngakumbi malunga - IiTattoos zeSkull zeSkull ze50
Uyilo lweKhakhayi luya kuhlala luyinto ephambili yekratshi lobugcisa bomzimba. Enye yeendlela ezilungileyo zokuqhayisa lo mfanekiso mhle ngokubonakalayo kukunyanzelwa kweetattoos zemikhono yokhakhayi.
Ngelixa ii-tatoo ziguqukele ngokuphawulekayo ukusukela kumhla wabo we-heyday, ukhakhayi lusaqhubeka ukuya kumaxesha anamhlanje kwaye luya kuhlala luyimbono yoyilo lwe tattoo.
21. IiTattoos zomculo woMculo
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango zeTattoo zomculo ezingama-60
Igcisa lomculo okanye i-icon, amanqaku okudanisa kuwo wonke umculo oshicilelweyo, okanye amazwi wengoma yakho oyithandayo eyinki engalweni yakho ayisiyiyo incoko yoncoko kuphela, sisikhumbuzo esingapheliyo ngento oyithandayo kunye nobugcisa obuyithandayo.
Njengokuba kungekho ndlela inye yokuxabisa umculo, kukho iindlela zetattoo zomntu wonke, nokuba ukhetha okuncinci kwaye okulula okanye okukhaliphileyo nokuqaqambileyo.
Ngokufana nesymphony equlunqwe kusetyenziswa izixhobo ezininzi ezahlukeneyo, itattoo yamagcisa owathandayo anempembelelo okanye ukudibanisa okulula kwamanqaku kunye nezitshixo ezivela kwiingoma zakho ozithandayo bubugcisa.
22. Iitayile zikaYesu zemikhono
Bona ngakumbi malunga - 51 Izimvo zikaTattoo zikaYesu
Gqamisa unxibelelwano lwakho kwigunya elingaphezulu noYesuumkhono umvambo. Uyilo lukaYesu ngengalo epheleleyoumkhonougoba umzimba wakho ngomsebenzi wobugcisa nokholo, kwaye ungoyena ndoqo kuwoiitattoo zonqulo.
OkuumvamboUnokugxininisa imiba ephambili kaKristu, ukusuka kuKumkani oMkhulu ukuya kuMalusi Olungileyo. Ingalo yakho inokuba sisityhilelo esikhulu sevangeli elinamandla kunye noYesuingaloumkhono umvambo.
Ngaphezulu kwayo nayiphi na enyeiitattoo zonqulo, Imikhono kaYesu inokutyhila ibali lokholo ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
23. IiTattoos zomlenze womlenze
Umthombo: @rafal_jedrychowski_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @dannytattooer nge-Instagram
Umthombo: @seminyakinkbali nge-Instagram
Umthombo: @ tat2brett nge-Instagram
Umthombo: @greytonesbyenes nge-Instagram
Umthombo: @ graphix6 nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-85 ze-sleeve sleeve
Imikhono ngamanyathelo amakhulu nakweyiphi naumvamboumthandiUmnqweno wokugubungela ngokupheleleyo, kwaye ugcweleumlenze umvamboUyilo lubalulekile njengolo lubekwe ezingalweni.
Naliphi na inani leekhonsepthi kunye noyilo linokusetyenziswa kwayeumlenze umkhono umvamboizimvozahlukile kwaye zahlukile njengabantu abazinxibayo.
Abanye abantu bakhetha indlela ye-hodge-podge apho uthotho lweiiTattoos ezincinciziboshwe ngokudibeneyo ngokusebenzisa ii-filler tattoos, okanyeinkiUkuqhekeza izinto zibe ethangeni, umsipha, isin, kunye netholeumvamboizimvo. Le ndlela isebenza ngokukodwa kwimisebenzi yesiko laseMelika.
Abanye abantu basebenzisa isicwangciso esiliqili esisebenzisa yonkeumlenzenjengeseyile enkulu yento enyeumvambo.
Umnyama kunye nomhlophe tiger yaseJapan
Iitattoo zikaYesu emnqamlezweni
tattoo emnyama kunye nengwevu yokwenyani
I-yin kunye ne-yang koi tattoo yeentlanzi
Iishawa zekona zezindlu zangasese ezincinci
imibono epholileyo ye tattoo kumantombazana